मुटुको चालमा किन आउँछ गडबडी? रोकथाम र उपचार – डा मनबहादुर केसी [भिडियोे] - Chautari Post Online
मुटुको चालमा किन आउँछ गडबडी? रोकथाम र उपचार – डा मनबहादुर केसी [भिडियोे]
July 6, 2019 by Chautari Post Online
मानव शरीरको अति नै संवेदनशील अंग हो मुटु। पछिल्लो समय नेपालमा मुटुका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसमा पनि मुटुको चालमा गडबडी आउने बिरामीको चाप बढ्दो छ। मुटुको चालमा किन गडबडी आउछ? यसको उपाचार के छ? यस विषयमा वरिष्ठ मुटु रोग विषेशज्ञ डा मनबहादुर केसीसँग बिन्दु शर्माले गरेको कुराकानीः
मुटुको चालमा किन गडबडी आउँछ?
मुटुको चालमा गडबडी आउने कारण धेरै छन्। मुटुको चाल धेरै हदसम्म उमेरसँग सम्बन्धित छ। बच्चामा भने मुटुको चालको गडबडी अलि कम हुन्छ। जति उमेर बढ्दै गयो चालको गडबडीको समस्या त्यति नै देखापर्ने हुन्छ। त्यसलाई डाक्टरी भाषामा डिजेनेरेटिभ चेन्ज भनिन्छ। र मुटुको चालको अध्ययनलाई कार्डियाक इलेक्ट्रोफिजियोलोजी भन्ने गरिन्छ।
जुन ठाँउबाट मु्टुको चाल निस्किन्छ र पास हुन्छ, त्यस्तो ठाँउमा हुने गडबडी उमेरसँगै फरक पर्ने हुन्छ। कतिपयमा यो गडबडीको समस्या वंशाणुगत पनि भएको पाइन्छ, तर यस्तो गडबडीले विषेशत बुढ्यौलीमा असर पर्छ। ती बाहेक पनि विभिन्न रोगको कारण मुटुको गडबडीको समस्या आउने हुन्छ।
कहिलेकाहीं मुटुको चाल पास हुने ठाँउमा रक्तसञ्चार कम हुँदा पनि गडबढी देखिन्छ। जसलाई हामी हृदयघात भन्छौं। एबी नोड तथा बन्डल ब्रन्चमा (जहाँबाट मुटुको चाल पास हुन्छ) हुने संक्रमणको कारण पनि मुटुको चालमा गडबढी आउँछ। त्यसमा अझै धेरै प्रभावित हुने भनेको बुढ्यौली उमेर नै हो।
विगतको वर्षलाई फर्किएर हेर्दा २०४० देखि २०४५ को बीचमा पनि मुटुको चालको गडबढीको समस्यालाई लिएर केही उपचार पद्धति सुरु भएका थिए। तीमध्ये एक मुटुको चाल गडबडीको समस्यालाई रोक्न पेसमेकरको उपचार सुरु हुँदै थियो। त्यति बेलाबाट सुरु भएको पेसमेकर अहिले पनि उही मूल्य तर पहिले भन्दा गुणस्तर र भरपर्दो तरिकाको आएका छन्।
पेसमेकरको काम के हो? मुटुको चालको गडबडीमा आउने समस्या रोक्न यसले कसरी सहयोग पुयाउँछ?
सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा मुटुको रिदम बनाउनेलाई पेसमेकर भनिन्छ। मुटुको चालको गडबडीमध्ये धेरैजसोमा देखिने साझा समस्या हो मुटुको चाल ढिलो हुने। ढिलो यतिसम्म हुन्छ कि, मान्छेलाई आफ्नो जीवन धान्नै पुग्दैन। जसका कारण मान्छे बिहोस हुन्छ। पुन त्यो होस आएन भने मानिसको मृत्यु नै हुन्छ।
कहिलेकाहीं मान्छेको मुटुको चाल १ मिनेटमा २५ देखि ३० भन्दा कम र कहिलेकाहीं चल्दैन पनि र मान्छे पल्टिन्छ। तर पनि मानव शरीरमा भएको संचित शक्तिका कारण मुटुको चाल २० देखि २५ को फरकमा भए पनि विस्तारै उठ्छ।
आज भन्दा ७५ देखि ८० वर्ष पहिले मुटुको चालको गडबडीको उपचार थिएन। विश्वमै १९६० बाट पेसमेकरको उपचार सुरु भएको हो। मुटुको चाललाई छिटोबाट ढिलो बनाउने औषधि पाइन्छ। तर ढिलोलाई छिटो बनाउने औषधि त्यति प्रभावकारी छैनन्। तर पेसमेकरले त्यो सम्पूर्ण गडबडीलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ।
यो एक किसिमको ब्याट्री हो, यसको आयु कम्तीमा पनि ८ वर्षको हुन्छ। ब्याट्री सकिन लागेको या सकिन कति समय बाँकी छ जस्ता कुरा पहिले नै थाहा हुने भएकाले अहिले यसलाई सजिलो उपचार मानिन्छ। तसर्थ मुटुमा त्यो मेसिन जडान गरेपछि चालको गडबढीले हुने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। मुटुमा हुने पियसभिटी र भिटी जस्ता समस्या पूर्ण रुपमा निको हुन्छ।
मुटुको चाल गडबडीको रोकथाम के हुनसक्छ?
चिया, कफी, अल्कोहल, धूमपानले मुटुमा असर गर्छ। त्यसकारण आफ्नो जीवनशैली बदल्न जरुरी छ।
मुटुको चालमा गडबडी हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन्?
रिँगटा लाग्ने, मुटु हल्लिने, रिँगटाले गर्दा बेहोस हुने, छाती दुख्ने जस्ता समस्या हुनसक्छ। यस्ता लक्षण देखिए तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल वा मुटु विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ।
गंगालाल हृदय केन्द्रमा आएका बिरामीको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मुटुको बाथ, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, जन्मजात हुने मुटुको रोग, मुटुको चालसम्बन्धी गडबडी, मुटुको मांसपेसीमा लाग्ने रोग बढी देखिने रोग हुन्। करिब ९० प्रतिशत मुटु रोगको सफल उपचार नेपालमा सम्भव छ। अस्पतालमा कतिपय रोगको उपचार निःशुल्क छ।स्वास्थ्य खबरपत्रिका
Prevबालबालिकामा हुने दृष्टि दोषका ५ लक्षण र उपचार
Nextभारतले नेपाललाई दिने अनुदान ५० प्रतिशत बढ्यो